Ụbọchị My Pet » Top ise Online dịwara Safety Atụmatụ
Dị nnọọ ka na omenala mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị otú na-ebu ya ole na ole ize ndụ. E nwere mgbe niile ga-ndị si n'ebe na ọjọọ ma ọ bụ na-emerụ ebumnobi. Ezie na ọtụtụ online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ na-emejuputa atumatu echetakwa na nchekwa jikoro ewepụkwa ihe ụfọdụ ndị omekome ma ọ bụ ndị di na nwunye, nke a bụ mgbe foolproof, na ọ bụ kpamkpam ruo na onye na-nchekwa jikoro n'ime aka ha.
Ebe a na-ise online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nchekwa Atụmatụ ndị dị oké mkpa na-echebe onwe gị mgbe akpa online:
1. Mee ka gị na akaụntụ email amaonye. Jiri a free email ọrụ akaụntụ dị ka Hotmail ma ọ bụ Yahoo! melite akaụntụ email na-adịghị enye ọ bụla onye ọmụma. Ị na-eji ọrụ gị adreesị email ma ọ bụ adreesị na-egosi na gị na aha mgbe agwa ya okwu na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọkụ. Ọzọkwa, adịghị enye gị email adreesị kwa anya. E nwere ụfọdụ ndị si n'ebe na-eji online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ ịchịkọta adreesị email site na aka ya dị ọcha kpọrọ ya na ha nwere ike zipụ SPAM ozi.
2. Nye gị cell nọmba ekwentị kama n'ụlọ gị gị na ọnụ ọgụgụ mgbe na ekwentị oku ogbo nke online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị. Ọ bụrụ na ị na-depụtara na ekwentị akwụkwọ, enye gị n'ebe obibi gị na nọmba ekwentị na ihe dị ka enye gị zuru aha na adreesị ụlọ. Na online technology, ọ dị mfe pịnye a n'ụlọ nọmba ekwentị n'ime Google, na, ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ndị na-edepụtara, aha gị na adres ga-egosi n'elu tinyere na nọmba ekwentị. Ị nwere ike inye ihe ọmụma karịa ị na-eche na ị bụ.
3. Imeri n'ebe ọha na gị mbụ ole na ole ụbọchị. A n'ebe ọha na-emesi a elu nke nche na nchekwa dị ka a ga-enwe ọtụtụ Ndịàmà na na gị ụbọchị ga-amaghị gị adreesị ụlọ. Ọ bụ na-ezi echiche na-agwa enyi ebe ị ga-na mgbe ị ga-alọta, adịghị ama ama.
4. Mgbe a ga-ike gwụrụ nke onye ọ bụla na-arịọ maka ego. Ọ bụrụ na onye ị kpọtụrụ site na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ amalite na-arịọ gị eresị tupu ị izute, i nwere ike fọrọ nke nta na-ekwe nkwa na ha bụ ojoro artists. E nwere ìRussian Brideî ụlọ ọrụ si n'ebe agbalị ojoro unsuspecting ikom si ego site na-enwe inyom (mgbe ụfọdụ ndị inyom na-adịghị ọbụna dị adị n'ezie) na-arịọ maka ego site na ndị mmadụ nọ maka flights pua ihu ha, naanị akwụsị mgbe ha nara ego. Ọ dịghị ihe mere na online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị kwesịrị abuana enye ego onye nke ọzọ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ileta Iveta na Slovenia, ofufe ịhụ ya, adịghị blindly nye ya ego.
5. Atụkwasị obi gị gootu. Ọ bụrụ na gị gootu mmuo-agwa gị na a Ihọd ma ọ bụ nwa agbọghọ na-adịghị agwa unu eziokwu, nwere ọjọọ n'obi, ma ọ bụ ga-ejedebe na-emejọ gị, na-ege ntị na mmuo. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe ọ bụla-acha uhie uhie flags, dị ka ịpị maka ozi gbasara kwa anya, na-esi ọnwụ na-eburu gị na ụlọ gị na nke mbụ ụbọchị, ma ọ bụ possessive ọchịchọ ọbụna tupu ị izute, eche echiche ugboro abụọ banyere òkè nọmba ekwentị gị, adreesị ozi ịntanetị, ma ọ bụ karịsịa adreesị ụlọ. Ọzọkwa, na-anya maka onye nwere ike ugbua lụrụ di na nwunye. Ọ bụrụ na ọ dịghị mgbe ha chọrọ ka ị na-akpọ, ga-enye nkọwa banyere ha si ebi ndụ, ma na-agbalị na-niile nzuzo, e nwere ihe nwere ike ime ka ị na-emeso onye lụrụ alụ.
Cheta na n'agbanyeghị na ụfọdụ mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị tout ndabere ndenye ego, ị ga-anọ gị nche. Ndị mmadụ pụrụ ileghara site ndabere ego cracks mere adịghị ka ndị omempụ na alụmdi na nwunye na-enye gị akwụkwọ ndenye ego a ụgha ala. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị nwere ike ịbụ a nchebe na fun ụzọ izute àgwà kpọrọ, ma ọ dịghị mgbe ọ bụla nke akwadoro ma mgbe niile na-gị nche ke mmalite.